» यति राम्रो बन्यो प्रविण र समिक्षाको ‘नबोली नबोली’
यति राम्रो बन्यो प्रविण र समिक्षाको ‘नबोली नबोली’
१० आश्विन २०७७, शनिबार २०:११
मकवानपुर, १० असोज । नेपाल आईडल सिजन ३ का फस्र्ट रनर अप प्रविण बेड्वाल र गायिका समिक्षा अधिकारीको ‘नबोली नबोली’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । प्रविण र समिक्षाको आवाजमा तयार भएको यो गीत २४ सेप्टेम्बरमा ‘द डिभाईन म्यूजिक’ को अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको हो । चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलको शब्द, संगीत तथा एरेञ्जमा तयार भएको यो गीतलाई सजन शाहले मिक्सिङ मास्टरिङ गरेका छन् । गीतलाई ए प्लस स्टुडियोमा रेकर्डिस्ट नरेश बिबिसीले रेकर्ड गरेका हुन् । हेर्नुहोस् गीतको म्युजिक भिडियो–
गीतको म्यूजिक भिडियोमा सुधिर श्रेष्ठ, गरिमा शर्मा र बसन्त अधिकारी, माधव शर्मा, शिशिर श्रेष्ठ, अनामिका बराकोटी लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् । उत्सव दाहालको छायाँकन तथा विधान कार्कीको निर्देशनमा बनेको म्युजिक भिडियोलाई विकाश दाहालले सम्पादन गरेका हुन् । भिडियोमा फरक परिवेश र वर्गका एक जोडी प्रेमी प्रेमिकाको कथा समावेश गरिएको छ । गीत र म्युजिक भिडियो उत्कृष्ट बनेकोले यसलाई दर्शक र श्रोताहरुले सर्वाधिक रुचाउने देखिएको छ । हेर्नुहोस् यो भिडियो रिपोर्ट–
आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई प्रविण बेड्वाल र समिक्षा अधिकारीको यो गीत कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । भिडियोको लिंक यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा पनि राखिएको छ । साथै युट्युबमा द डिभाईन म्यूजिक सर्च गरेर पनि सिधै हेर्नसक्नुहुनेछ । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
पैसा आजको समयमा सबैलाई आवश्यक छ । पैसा भए सबथोक छ भन्ने सोचाईबाट मानिसहरु ग्रसित छन् । पैसा सबथोक त होईन तर जीवनयापनका लागि पैसा जरुरी कुरा चाहिँ अवश्य हो । हाल विश्वमा सबै मानिसहरुले पैसा कमाउनका लागि विभिन्न तरिकाहरु अपनाएका छन् । पैसा कमाउने सजिलो उपायहरु मध्ये अनलाईनबाट घरमै बसेर पैसा कमाउने विषय हरेक मानिसहरुका लागि सजिलो तरिका हुनसक्छ । तर यसमा धैर्यता भने चाहिन्छ । अनलाईनमा पैसा कमाउन पाईन्छ भनेर विज्ञापन गर्ने विभिन्न फेक तरिकाहरु पनि दिइएका छन् तर आस मात्र देखाउने ती तरिकाहरुमा तपाई नपरेकै जाति । किन कि अनलाईनबाट पैसा कमाउन त्यति सजिलो छैन । जे होस् सामान्य जीवनयापनका लागि भने हामीले अनलाईनबाट समेत पैसा कमाउन सक्छौँ । यो भिडियोमा हामीले पैसा कमाउने सही तरिकाहरुका बारेमा बताएका छौँ जसबाट साँच्चै पैसा कमाउन सकिन्छ र यो कानुनी रुपमा पनि बर्जित छैन । कसरी कमाउने त अनलाईनबाट पैसा ? यो जान्नका लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ।